Vitamina amin'ny sakafo
Ny ankizivavy tia lamaody, dia matetika no voamarik'io karazany io: "Tsy mihanjahanja io sakafo io, ary mandritra izany dia ilaina ny mihinana vitaminina." Toa tsotra izao ny zava-drehetra, nefa mendrika hanaovana famatsiam-bola, ary miharihary fa tsy asa mora izany: ny zava-misy dia maro be ny vitamin complexes, ny firafitra sy ny endriky ny famotsorana dia hafa ho an'ny rehetra, ary sarotra ny mahatakatra ny zavatra tokony hofidiana . Ho takatsika hoe inona avy ny vitaminina amin'ny sakafo.
Vitamina amin'ny sakafo: inona ary nahoana?
Ankehitriny dia mihoatra noho ny ankizivavy maro no miezaka ny handany lanjany mandritra ny fotoana fohy, noho izany ny lamaody dia ny sakafo tsy mifandanja sy ny hanoanana, ka noho izany ny vatany manontolo no mijaly. Ny sakafo dia tsy vitan'ny hery fotsiny amin'ny fiainana, fa loharanom-pamokarana vitaminina sy mineraly ihany koa izay mandray anjara amin'ny dingana metabolika ary mamela ny vatany miasa tsara. Izany no mahatonga ny vitamina sy ny sakafo tsy azo sarahina.
Inona no vitan'ny fofona rehefa misakafo?
Miankina amin'ny karazan-tsakafo arahinao, mila mitondra voly vitaminina samihafa ianao. Matetika ny diabeta dia mifototra amin'ny hoe misy proteinina rehetra, na matavy, na voan'ny kômôhy, ary tsy izany no fomba tsara indrindra hahatonga ny vatana. Andao hodinihintsika hoe inona avy ny vitamina ilaina amin'ny sakafo amin'ny tranga tsirairay.
Vitaminina miaraka amin'ny proteinina (kalôpia ambany) . Raha mifototra amin'ny akoho, trondro, henan'akoho, fodiana an-tanety, tsaramaso ny sakafo - ny endri-tsakafo dia sokajiana ho proteinina. Amin'ity tranga ity, ny vatanao dia iharan'ny tsy fahampian'ny vitamin C sy ny tena zava-dehibe - fibre. Manolo-kevitra ny hitondra siramamy na fanangonana toy ny "Siberian Fiber", izay azo jerena ao amin'ny pharmacy rehetra.
Vitaminina mandritra ny fihinana voankazo (low-protein) . Raha ny anao Ny sakafo dia mifototra amin'ny fihinanana legioma sy voankazo, ny zavatra tena ilain'ny vatana dia vitaminina ny vondrona B, ary koa ny A sy E, izay tsy hita afa-tsy amin'ny sakafo avy amin'ny biby. Mitadiava vitaminina B vitaminina B, izay mampanan-karena amin'ny A sy E, na mividy azy ireo manokana.
Vitamina ho an'ny sakafo matavy . Ny fihinanana sakafo izay miteraka fatina dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamana. Na dia mampihatra izany aza ianao, dia ilaina ny maka kapsules amin'ny menaka trondro - ny fampiasana maoderina dia tsy ahafahanao mahatsapa ny tsirony, fa ny hahazo izay rehetra ilainao.
Ny fanafody vitaminina dia tokony mifanaraka amin'ny torolàlana ao amin'ny fonosana, matetika, amin'ny fianarana, ary tsy mandritra ny sakafo. izany hoe Raha sakafo isaky ny herinandro, ary misy fandaharam-pianarana 2 herinandro, dia mendrika ny misotro vitamina daholo ny herinandro rehetra.
Walnut: votoatin'ny kaloria
Ny holatra - ireo toetra mahasoa sy ny fanoherana
Kafe dia tsara sy ratsy
Mofo mangatsiaka eny ambony rano - tsara sy ratsy
Maltodextrin - inona no atao amin'ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena sy ny fomba ampiasana azy amin'ny fambolena?
Mamoaka zava-pisotro misy alkaola
Ny fitomboana sy ny lanjan'i Rihanna - tsara sa tsia?
Faneriterena atopika amin'ny ankizy - fitsaboana
Dieffenbachia - azoko atao ve ny mitazona trano?
Chandelier ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny
Voajanahary voankazo miaraka amin'ny Tomato sy Garlic
Antibiotika ho an'ny pharngitis
Akorandriaka amin'ny rindrina sy rindrina
Ny volokano lehibe indrindra eran'izao tontolo izao
Artichoke - toetra mahasoa
Mpitsoa-ponenana in-droa isan-kerinandro taorian'ny fandidiana
Opera ny Gothenburg